Studio @ Eagle Bay - I-Airbnb
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Genevieve
U-Genevieve Ungumbungazi ovelele
I-Studio enegumbi lokulala lendlovukazi elihlukile, igumbi lokugezela, indawo yokuhlala ehlukene kanye nekhishi. Lesi sikhala siza nendawo yangaphandle ezungezwe ingadi enkulu, enikeza kokubili ubumfihlo kanye nokunethezeka, futhi ihlukaniswe ngokuphelele nanoma yikuphi ukuxhumana nomsingathi noma ezinye izakhiwo.Indawo yokupaka izimoto eseduze nendawo.
Uhlelo olukhulu oluvulekile oluhlala nengaphakathi elingaphakathi kodwa lesimanjemanje neliklanywe ngokwakhiwa, ukuhamba kwesikhashana kude nolwandle oluhle lwe-Eagle Bay. Akukho ukupheka okutholakalayo. Izinto zikagesi zihlanganisa i-microwave, itoaster, umshini wekhofi, ujeke kagesi, isomisi sezinwele, ifriji. I-WiFi. Ibhulakufesi lase-Continental linikeziwe.
Ubuhle bemvelo obuhle be-Eagle Bay beach e-Cape Naturaliste. Imizuzu eyi-10 ushayela usuka eDunsborough edumile futhi usondele kwamanye amatheku afana neBunkers Bay, Meelup, Yallingup neSugarloaf. Izikhathi ngemoto kusukela endaweni yokuphisa utshwala, izivini nezindawo zokudlela zasendaweni. Itholakala ekugcineni komgwaqo othulile, imizuzu emi-3 ukuhamba ngezinyawo ukuya olwandle oluhlanzekile.
Ababungazi bahlala endlini enkulu ekude ne-studio enomnyango wayo ohlukile. Ababungazi bazotholakala uma udinga noma yiluphi usizo.
UGenevieve Ungumbungazi ovelele